WARARKA BARAAWEPOST axad 22 may 2011
Taliyaha ciidanka booliska oo sheegay inay diyaar yihiin ciidamada booliska ee la geyn lahaa suuqa bakaaro
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyed Jen. Shariif Sheekhuna Maye oo maanta wareysi siiyay Idaacada ku hadasha afka Dowladda ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in Ciidamo boolis ah ay diyaariyeen, kuwaasoo uu sheegay inay geynayaan goobaha lala wareego.
Jen. Shariif Sheekhuna Maye ayaa sheegay in Ciidamo Boolis ah ay u diyaariyeen Suuqa Bakaaraha, si buu yiri Ammaanka ay u sugaan, isagoo xusay in Ciidamadu ay haatan dib u habeyn uu ku socoto.
"Meel alla meeshii ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegaan gacan ku heynteeda la waxaan geyn doonaa Ciidamo Boolis ah oo suga ammaanka, waxaana u diyaarinay suuqa Bakaaraha Ciidamo Boolis ah"ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Booliska.
Sidoo kale waxaa uu xusay inay jiraan Ciidamo Boolis ah oo ku xareysan dugsiga Tababarka ciidanka booliska ee Jeneraal Kaahiye (Ex Scula Polizia), isagoo sheegay in Ciidamadaas dhowaan ay heli doonaan xuquuqdooda, isla markaana la geyn doono saldhigyo, waxaana uu xusay in Ciidamadaas ay haatan ku socoto tira koob iyo tayeyn intaba.
Dhinaca kale Maamulka Gobolka Banaadir ayaa iyana ka dhawaajiyay in Ciidamo la geynayo suuqa, iyagoo sheegay in loo diyaariyay Labo saldhig oo Ciidamada ka sameysan doonaan gudaha suuqa si loo sugo ammaanka.
Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir C/kaafi Hilowle ayaa sheegay in Ganacsatada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan Ciidamada, isagoo tilmaamay in Ciidamada ay sugi doonaan ammaanka suuqa oo aanay dhici doonin in lagu xadgudbo.
Hadalada ka soo yeeray Taliska Booliska iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku soo beegmaya xilli Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay gaareen Jidka Wadnaha oo marta Suuqa Bakaaraha.